के तपाइँको कम्प्युटर सुरक्षित छ? - Nepali Virals
के तपाइँको कम्प्युटर सुरक्षित छ?
६ पुष २०६९, शुक्रबार १५:४५	362 पटक-पढिएको
कम्प्युटर। मनोरञ्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, व्यवसाय सबैका क्षेत्रमा यसको आधिपत्य बढिरहेको छ। विश्व नै इन्टरनेटको माध्यमबाट नजिकिइरहेको समयमा कम्प्युटरको महत्व र आवश्यकता बढिरहेको छ। यतिखेर कुनै पनि त्यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ कम्प्युटरको प्रयोग नभएको होस्। दूरसञ्चार क्षेत्रमा त कम्प्युटरको प्रयोगले प्रविधि र प्रयोगको नयाँ शैली मात्र विकास गरेको छैन यसले व्यवसायको प्रकृति नै बदलिदिएको छ। विद्यालयमा कम्प्युटर नभइकन अध्ययन अध्यापन नहुने अवस्था आउन लागिसक्यो। रंग पसल देखी चुरा र पान पसलमा समेत कम्प्युटर व्यवसायका अभिन्न अंग बनिसकेका छन्। जसले व्यवसायीको कार्यक्षमता साथै बजारको पहुँच र सूचनाको स्तर बढिरहेको छ। इन्टरनेटसम्मको पहुँचले सबैलाई कम्प्युटर शिक्षित बन्नुपर्ने अनिवार्य नै गरेको छ। यतिखेर यही कम्प्युटर नाम गरेको बट्टामा नै दुनियाँ छ। खरिदारी देखी सिनेमा अनि शिक्षा र सूचना यसैमा भएका कारण कम्प्युटर सिक्ने, किन्ने र प्रयोग गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। साथै चोर, फटाहा पनि कम्प्युटरमा नै उपलब्ध हुन थालेका छन्।
जसले अनेकन फर्जी इमेल पठाएर तपाइँ हामीलाई माछालाई बल्छीमा पारे झैं पार्छन् र पैसा धुत्छन्। माछामार्ने शब्द फिसि प्रयोग हुन्छ हामीलाई ठग्ने कामका लागि। त्यसो त अनेकन भाइरस र स्पाइवेयर मार्फ हाम्रा कम्प्युटर बिगार्ने र सूचना, जानकारी चोर्ने काम पनि हुन्छ कम्प्युटरमा। तपाइँको कम्प्युटरमा डाटाका रुपमा रहेका तपाइँका गोप्य सूचना हृयाकर अनि स्पामरका जालमा परेर ध्वस्त हुन्छन्। तपाइँलाई आर्थिक हानी त पर्छ नै हैरानी पनि कम्ता हुँदैन। त्यसैले आवश्यक छ कम्प्युटरको सुरक्षामा ध्यान दिनु। ’cause तपाइँ हामी जस्तै चोर, फटाहा हर पनि कम्प्युटरमा नै छन् त्यसैले आफ्नो कम्प्युटर र तीनमा रहेका डाटालाई सुरक्षा गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।
आफ्नो कम्प्युटरको सुरक्षाको अवस्था थाहा पाउनका अनेकन सफ्टवेयरहरु निशुल्क उपलब्ध छन् जसमध्ये एक हा सेक्युरिटी एनेलाइजर। (यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस्) जसले तपाइँको कम्प्युटरका आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड जाँच गर्दछ। र तपाइँलाई कम्प्युटरको अवस्था ’bout जानकारी दिन्छ। यसले कम्प्युटरमा Antivirus, Antispyware, Third-party firewall, Windows Firewall, NAP ( Network Access Protection ), Windows updates र User Account Control को अवस्था जाँच गरेर तपाइँलाई कम्प्युटरमा भएका भाइरस तथा अन्य असुरक्षित गतिविधिको जानकारी गराउँदछ। यो आकारमा सानो १५० केबीको छ भने निशुल्क पनि छ।
अघिल्लो कुन वेबसाइट कतिले हेर्छन्
पछिल्लो यहाँ छन् फ्रि हिन्दी गीत